Fifidianana fihodinana faharoa: niparitaka sy nahazo laka ny kara-panondro hosoka | NewsMada
Fifidianana fihodinana faharoa: niparitaka sy nahazo laka ny kara-panondro hosoka
Tena nisy fa tsy resaka fotsiny ny fisian’ny kara-panondro sandoka. Nisy, ohatra, saika hampiasana izany tamin’ny latsa-bato teny Andafiatsimo, Tanjombato. Toy izany koa ny teny amin’ny lycée Rabearivelo, Analakely ary tsy navela hifidy. Teny amin’ny lycée teknika Alarobia. Sarona tany Ambanja koa ny karapanondro hosoka maherin’ny 800 ary efa niditra an-tsehatra ny vadin-tany nanaraka akaiky izany. Tsy tokony hijanona amin’izao anefa ny raharaha tahaka izao. Aleo handeha ny fanadihadiana sy ny famotorana ahitana ny nipoiran’izany hosoka izany, hialana amin’ny resabe hatreny amin’ny trano printim-pirenena.
Na izany aza, tsy niseho ny olana lehibe tamin’ny fifidianana. “Amin’ny ankapobeny, nizotra tamim-pilaminana sy araka ny tokony ho izy ny fifidianana manerana an’i Madagasikara. Tsy ilaozan’izay olana vitsivitsy nitranga, niteraka fahatarana teo amin’ny fanombohan’ny latsa-bato tamin’ny biraom-pifidianana sasany.” hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, omaly. Teo, ohatra, ny entana tsy hita na tsy ampy, rehefa nosokafana ny baoritra misy ny fitaovam-pifidianana tamina biraom-pifidianana sasany. Efa nahita vahaolana avokoa ireny.
Nisy ny olana tamin’ny biraom-pifidianana iray teny Ambohipo, tsy hita ny fonosana biletà tokana. Olon-tsotra no nanatitra izany teny amin’ny Ceni. Efa mandeha ny famotorana. Tsy marina ny hoe nisy olona telo nosamborina ary nakarina fitsarana. Efa nametraka fitoriana olon-tsy fantatra ny Ceni.
Kara-pifidianana efa tamin’ny taona 2013
Ankoatra ireo voalazan’ny Ceni ireo, niteraka olana koa, ohatra, ny fidiran’ny delege amin’ny biraom-pifidianana: misy ny mamilafila na tsy mamela azy ireo hiditra, ao ny delege misisika hiditra ny roa amin’ny kandidà iray…
Hafakely ny teny Ankazomanga: kara-pifidianana tamin’ny taona 2013 no nentina olona telo nifidy. Tsy navela handrotsa-bato izy ireo. Maizimaizina kosa ny efitra fisainana ka voatery nitady olona hanoro izay homarihina amin’ny biletà teny 67 ha.
Toy ny tamin’ny fihodinana voalohany, nisy hatrany ny mpifidy nitaraina fa tsy ao amin’ny lisi-pifidianana ny anarany. Nisy nanana kara-pifidianana nefa tsy voasoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana.